Tirakoobka Shabakadda Moobilka | Martech Zone
Istaatistikada Gaadiidka Webka ee Mobilada
Jimcaha, Sebtember 7, 2012 Adam Yar
46% dadka Mareykanka waxay leeyihiin taleefan casri ah nooc nooc ah. Taasi waa tirakoob aan caadi aheyn oo la siiyay in ay jiraan dad badan oo folks ah dhamaadka kasta oo qalooca daweynta da'da. Mobaylku sidoo kale waa qaab aasaasi ah oo dadku ugu xirmaan webka, maahan mid labaad. Desktop-ka ama laptop-ka adiga kulama socdaan 24/7 - xitaa kaniini kuma jiro - laakiin qalabkaaga mobilada ayaa ah. Caalami ahaan, tirada dadka isticmaala mobilada si ay u galaan shabakadda ayaa xitaa ka badan. Wadamo badan, waa habka kaliya ee ay ku heli karaan.
Istaatistikada Gaadiidka Webka ee Mobilada wuxuu daboolayaa tirakoobyadii ugu dambeeyay ee mobilka ee khadka tooska ah oo ay ku jiraan saamiyada mashiinka raadinta moobiilka, iibka Mareykanka ee 'M-commerce', Mobilada taraafikada ilaa 500 ee E-Tafaariiqley iyo waxyaabo badan oo dheeri ah.
Ahaanshaha aaladda isgaarsiinta, aaladda moobiilku waxay noqoneysaa gargaar dukaameysi maxaa yeelay awoodistiisa, helitaankeeda qiime dhimis iyo rasiidh, awood si fudud ugu sameynta cilmi baaris shey on iyo marin labaad oo dukaamada tafaariiqda ah marka qalab uusan oolin.
Macluumaad ku saabsan GO-Globe.com
Tags: moobiil caalami ahm-ganacsigaganacsigashare mobiletaraafikada shabakadda moobiilkagaadiidka web
Mashiinkaaga Spins wuxuu wadaa Daraasad iyo kalsooni daro
KANA Express: Maareynta Khibrada Macaamiisha